जन्मदिनमा पार्टी किन ?
- दियान डीसी | शनिबार, पुस १७, २०७८
हिजो (शुक्रबार) मेरो जन्मदिन थियो । मामुसित गएर गणेशस्थान र पशुपतिनाथमा माग्न बस्नुभएका मान्छेलाई खानेकुरा दियौँ । उहाँहरू खुसी हुनुभयो । एक जना आमाले मलाई गालामा माया गर्नुभयो । ठूलो मान्छे हुनू भन्नुभयो । उहाँलाई खुसी देखेर मलाई पनि खुसी लाग्यो ।
जन्मदिन मनाउँदा धेरै मान्छेहरूले पार्टी गर्नुहुन्छ । धेरै खर्च गर्नुहुन्छ । मन्दिर अनि बाटोमा बस्ने मान्छेहरू चैँ भोकै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको बाबुनानीले पनि वास्ता गर्दैनन् । उहाँहरू दुःखी भएर बस्नुहुन्छ ।
हामी सबैले आफ्नो जन्मदिनमा गरिब मान्छेलाई सहयोग गर्ने हो भने उहाँहरूले भोकै बस्नु पर्दैन थियो । मन्दिरतिर आँखा नदेख्ने, हातखुट्टाले काम नगर्ने धेरै मान्छे बस्नुभएको हुन्छ । तर, उहाँहरूकाे किन कसैले वास्ता गर्दैन ?
अब स्कुलमा साथीहरूलाई पनि म गरिब र आँखा नदेख्ने, हातखुट्टा नभएका मान्छेहरूलाई माया गर्न भन्छु । जन्मदिनमा पार्टीमा खर्च गर्न हुँदैन भनेर बाबामामुलाई सम्झाउनू भन्छु । बरू त्यस्तै पैसा काम गर्न नसक्नेहरूलाई सहयोग गर्न भन्छु ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १७, २०७८, ०८:४३:००